Inona ny Mono ary maninona no mety hampidi-doza | Avy amin'ny Linux
Inona ny Mono ary maninona no mety hampidi-doza?
Mono no anaran'ny tetikasa loharano misokatra natombok'i Ximian ary notombok'i Novell (taorian'ny fahazoana an'i Ximian) hamorona vondrona fitaovana maimaimpoana, miorina amin'ny GNU / Linux ary mifanaraka amin'ny .NET araka ny voafaritry ny ECMA. Fa maninona no halan'ny mpampiasa GNU / Linux maro?
1 Inona no atao hoe Mono?
2 Fiandohan'ny Mono
3 Sehatra tohanan'ny mono
4 Mifanaraka amin'ny Framework .Net ve i mono?
5 Inona avy ireo karazana fampiharana azoko foronina miaraka amin'i Mono amin'izao fotoana izao?
6 Misy fepetra takiana amin'ny fampiharana ve mba hifanaraka amin'ny Mono sy ny Framework .Net, izany hoe azo entina?
7 Inona avy ireo fitaovana fampandrosoana ao Mono?
8 Fampiharana natao ho an'ny Mono.
9 Gidro sy fahazoan-dàlana
10 Ny tolo-kevitro
11 Esory ny mono
12 Solon'ny Mono
13 Fampahalalana misimisy kokoa
Inona no atao hoe Mono?
Tsia, tsy misy ifandraisany amin'ny Monkey Island. mono dia ny fampiharana maimaim-poana ny CLI (Infrastructure Common Language Infrastructure) sy C # (samy noforonin'i Microsoft), araka ny pitsopitsony nalefa tamin'ny ECMA ho an'ny fanamarinana azy. Ity fampiharana ity dia loharano misokatra.
Mono dia ahitana ny CLI, izay misy ny milina virtoaly izay tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny kilasy, ny jit compiler (Just-in-time) ary ny mpamory fako; izany rehetra izany dia nosoratana avy tany am-boalohany araka ny spec Ecma-334.
Mono koa dia misy mpamorona C #, izay mifanohitra amin'ny voasoratra ao amin'ny C # ary toy ny CLI, ity compiler ity dia manaraka ny fepetra arahana Ecma-335.
Ankoatr'izay Mono dia manana katalaogin'ny tranomboky mifanaraka amin'ny tranomboky .Net Framework, nefa koa manana andiam-boky izay tsy misy ao amin'ny Microsoft's .Net Framework; toy ny GTK # izay mamela ny famoronana interface interface graphic an'ny GTK + toolkit, Mono.LDAP, Mono.Posix, sns.
I Mono dia notorontoronina avy amin'i Miguel De Icaza, izy no tetikasa tamin'izany fotoana natolotry ny orinasany Ximian; amin'izao Novell no mpanohana ny tetikasa Mono, hatramin'ny nahazoan'i Novell Ximian.
Ny antony manosika amin'ny famoronana Mono dia vokatry ny fikarohana fitaovana izay hanampy amin'ny famoronana haingana ny fampiharana amin'ny tontolo Linux.
Sehatra tohanan'ny mono
Mono dia mihazakazaka amin'ny sehatra x86, PPC, SPARC, ary S390 amin'ny 32-bit; ary x86-64 sy SPARC amin'ny sombiny 64; ny fahafaha-mamorona sy manatanteraka fampiharana amin'ireo rafitra miasa: Linux, Windows, OSX, BSD ary Solaris.
Mifanaraka amin'ny Framework .Net ve i mono?
Ny tanjon'i Mono dia ny hahatratrarana avo lenta ny mifanentana amin'ny API 1.1, na dia efa betsaka aza ny asa momba ny mifanentana amin'ny API 2.0 an'ny .Net Framework.
Izany dia mba hahazoana antoka fa ny binariera voangona ao amin'ny Windows miaraka amin'ny .Net Framework dia azo alefa amin'ireo sehatra Mono nefa tsy mila mamerina ny mimari-droa, ary izany dia afaka mampiasa ny Mono -Ej: fitehirizam-boky. Data, System.Xml, sns -.
Ireo tranomboky nomen'i Mono dia 100% mifanaraka amin'ny mifanitsy aminy .Net Framework. Ny kinova farany 2.6.1. anisan'izany ireo fiasa manandanja hafa:
Ny mpamorona C #
Ity farany ity dia - WindowsForms - ilay mila asa be indrindra mba ho vita manontolo. Na dia tokony homarihina aza fa ny tetikasa dia tsy mieritreritra ny famoronana tranomboky mifanentana amin'ny Enterprise Services.
Inona avy ireo karazana fampiharana azoko foronina miaraka amin'i Mono amin'izao fotoana izao?
Azo atao ny mamorona rindranasa sy Webservices karazana Web amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mody mod_mono mamela ny mpizara Apache Web hanompo ireo pejy ASP.NET (aspx) sy Web Services (asmx).
Azo atao ihany koa ny mamorona rindranasa miditra amin'ny tahiry toa ny Microsoft SQL, Oracle, Postgresql, sns.
Eo amin'ny lafiny fampiharana interface graphique, ny soso-kevitra dia ny fampiasana GTK #, satria ny toolkit izay iorenany (GTK +), dia ahafahana mampandeha rindran-tsary amin'ny tontolon'ny Linux, Windows ary OSX tsy misy fiovana; Nanjary zava-dehibe io soso-kevitra io, satria ny fampiharana mifanaraka amin'ny Windows Forms ao Mono dia mbola tsy feno.
Misy fepetra takiana amin'ny fampiharana ve mba hifanaraka amin'ny Mono sy ny Framework .Net, izany hoe azo entina?
Tena tsy misy manokana, raha toa ka fampiharana miorina amin'ny CLI; na dia misy hevitra vitsivitsy aza tokony hodinihina:
Linux dia marefo amin'ny tranga fisie sy ny lahatahiry; noho izany dia ilaina ny manana fiarahana mifanaraka amin'ireo anarana ampiasaintsika.
Ny Separator dia tsy mitovy amin'ny Windows () noho ny amin'ny Linux (/), noho izany dia ampirisihina hampiasa ny làlan'ny API Path.DirectoryPathSeparator, hahazoana ny mpampisaraka marina rehefa manatanteraka ny fampiharana.
Raha ampiasaina ny tranomboky tsy CLI (Ex: tranomboky amin'ny C, C ++ sns.), Amin'ny alàlan'ny p / Invoke, dia alao antoka fa misy ny tranomboky amin'ny toerana samihafa izay hamonoana ny fampiharana.
Aza mampiasa haitao izay misy amin'ny tontolo manokana (Ex: Registry amin'ny Windows na GConf amin'ny Linux -Gnome-); na manome vahaolana ahafahan'ny fampiharana miasa tsara amin'ny tontolo iasany.
Ny fampiharana miorina amin'ny Windows Forms ary izay tena sarotra dia mety tsy mandeha amin'izao fotoana izao, satria ny Windows Forms ao Mono dia tsy feno.
Inona avy ireo fitaovana fampandrosoana ao Mono?
Azo atao avy any Windows ny mamorona rindranasa amin'ny fampiasana Visual Studio. Amin'ny lafiny Linux dia misy MonoDevelop, IDE miorina amin'ny SharpDevelop.
MonoDevelop dia mamela ny fitantanana ny tetikasa, ny fandokoana ny syntax, ny kaody feno auto, manangona ary mampandeha ilay fampiharana avy amin'ny IDE iray ihany.
Amin'ny alàlan'ny fanampiana (add-ins) dia nitarina ny fampiasana, ohatra:
Mifandraisa amin'ny tahiry avy amin'ny IDE
Ny fampidirana debugger izay mamela, toa ny Visual Studio, mba hanatanteraka kaody isaky ny tsipika, ary hamerina hijery ireo sanda miovaova.
Misy ny asa ankehitriny hampidirana mpamorona endrika, na dia miompana amin'ny famoronana endrika ho an'ny GTK # fa tsy Windows Forms ity mpamorona ity.
Fampiharana natao ho an'ny Mono.
Betsaka ny rindranasa novolavolaina ho an'ny Linux ao Mono, hahazoana hevitra, ireto misy lisitra 2 miaraka amin'ireo rindranasa ireo:
Amin'ireo fampiharana miavaka ireo dia:
MonoDevelop: IDE ho an'ny programa Mono fandaharana ao amin'ny Linux. Ny IDE dia vita amin'ny C #.
F-toerana: Fandaharana fanaovana katalaogy sary, ankoatry ny fahafahany manao fanovana nomerika amin'ny sary.
Beagle: Fitaovana manara-maso sy mitady fampahalalana amin'ireo karazana antontan-taratasy isan-karazany ao amin'ny Linux.
Tomboy: Fandaharana mitahiry naoty izay ampifandraisin'ny teny lakile.
Muine: Izy io dia mpilalao audio mifototra amin'ny GStreamer.
PyMusique: Fandaharana manome interface graphique hidirana amin'ny fividianana mozika amin'ny serivisy iTunes an'ny Apple.
MonoUML: Tonian-dahatsoratra ny fanaovana sary miaraka amin'ny fenitra UML.
Gnome do: Mpandefa fampiharana haingana sy mahomby.
Docky: Midona amin'ny biraonao.
Banshee: Mpilalao haino aman-jery mifototra amin'i Gstreamer.
Gidro sy fahazoan-dàlana
Mono dia ny fampiharana loharano misokatra an'ny Microsoft's .Net Framework, miorina amin'ny fenitra navoaka tamin'ny ECMA; Satria fampiharana mifototra amin'ny vokatra Microsoft izany, ny fampiasana Mono amin'ny Linux dia niteraka resabe - teo amin'ireo mpampiasa Linux sy ny mpamorona - ny adihevitra dia ny hoe mety manitsakitsaka ny patanty Microsoft i Mono, izay mety ho lasa fitoriana amin'i Monkey.
Araka ny filazan'ny Page ny tetikasa Mono, raha toa ka manaraka ny fenitra eken'ny ECMA ny CLI sy ny compiler C #, dia azo antoka ireto singa 2 ireto, raha ny momba ireo tranomboky manokana Mono, dia tsy misy atahorana; fa ny fampiharana ireo trano famakiam-boky mifandraika amin'ny ASP.NET, ADO.NET ary Windows Forms dia mora tohina amin'ny fanitsakitsahana ny patanty Microsoft sasany - na dia tsy misy fahalalana aza fa izany no izy -; Noho io antony io, ny tetikasa Mono dia manolotra safidy 3 ho an'ny tranga farany:
Ampiasao indray ny fampiasa - hisorohana ny patanty -, manandrana hitazona ny API hifanaraka.
Esory ireo zavatra tsy azo ampiharina indray.
Mitadiava singa afaka manafoana ny patanty.
Araka ny Wikipedia, ny fampiharana an'i Mono an'ireo .NET singa tsy iharan'ny ECMA noho ny fanamarinana azy io dia niteraka ahiahy momba ny mety fanitsakitsahana ireo patanty rindrambaiko mandritra ny androm-piainan'ny tetikasa. Manokana indrindra dia nivoatra ny adihevitra momba ny mety hahafoanan'ny Microsoft ny tetikasa mono amin'ny alàlan'ny fitoriana momba ireo patanty voahitsakitsaka na tsia.
Misy adihevitra velona izao momba ny (amin'ny) fanamorana ny fanekena sy fampiasana Mono ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny developer GNU / Linux. Ny adihevitra lehibe manohitra an'i Mono dia ny hoe tsy afaka madiodio rindrambaiko izy io, ary ahiana ny mitaky fahazoan-dàlana hampiasana C # / CLI i Microsoft.
Etsy ankilany, ny tetikasa GNOME mamolavola fiteny hafa, vala, noforonina manokana hampivelatra ny rindranasa ho an'ny Gnome, saingy afaka amin'ny fandrahonana mety hitranga avy amin'i Microsoft.
Misy fandaharana tena lehibe sasany voasoratra ao amin'ny Mono amin'izao fotoana izao. F-Spot, Gnome Do na Docky ihany no azonao eritreretina. Saingy, manana safidy hafa maimaim-poana izay tsy manana ireo olana rehetra ireo dia aleoko tsy miankina amin'i Mono.
Amin'ny fanapahan-kevitra nampiady hevitra farany nataon'i Debian sy Ubuntu hampidirina mono amin'ny fametrahana azy default, tsy toy ny Fedora izay nanala azy, tamin'ny fampidirana fotsiny ny malaza fampiharana Tomboy, nosoratana tamin'ny C #, Richard Stallman dia manana teny fahendrena vitsivitsy izany dia tokony hanome aingam-panahy ho an'ny distro hafa.
Mampidi-doza ny miantehitra amin'ny C #, noho izany dia tokony tsy hataontsika manakana ny fampiasana azy io.
Tsy i Mono irery no olana, ny fampiharana C # maimaim-poana dia hanana olana mitovy amin'izany. Ny loza dia mety mikasa ny hanery ny fampiharana C # maimaim-poana rehetra ivelan'ny boaty i Microsoft indray andro any amin'ny fampiasana ny patanty lozisialy (ny). Loza goavambe io ary ny adala ihany no tsy miraharaha izany mandra-pahatongan'ny andro nitrangan'izany. Mila mitandrina isika mba hiarovantsika tena.
Tokony handamina zavatra hiankina amin'ny fampiharana C # maimaim-poana araka izay tratra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy maintsy mandrara ny olona tsy hanoratra programa C # isika. Noho izany dia tsy tokony ampidirintsika ny fampiharana C # amin'ny fametrahana default ny fizarana GNU / Linux, ary tsy maintsy mizara sy manome torolàlana momba ny fampiharana tsy C # izahay fa tsy fampiharana C # ampitahaina raha azo atao.
Esory ny mono
Te-hanala mono amin'ny fizarako Ubuntu aho (ary hamonjy habaka betsaka izay iankinan'ny fiankinan-doha aminy ary, raha ny tranga Ubuntu, dia tsy misy afa-tsy ny "manohana" rindranasa 2 napetraka amin'ny alàlan'ny default: F-Spot sy Tomboy). Raha tsy mampiasa ny iray amin'ireto roa ireto ianao dia esory amin'ny Synaptic ary koa ny fonosana rehetra milaza Mono na CLI.
Raha esorina ny Mono ao amin'ny Ubuntu, azonao atao ihany koa ny manokatra ny terminal sy ny karazana:
sudo apt-get esory --manorena libmono0 libgdiplus sudo rm -rf / usr / lib / mono
Araka ny hitantsika, voalohany indrindra, raha programmer ianao, aza manao programa amin'ny C #. Misy fiteny hafa tsy tambo isaina, tsara kokoa aza. Ary koa, Gnome dia namoaka fiteny vaovao vao tsy ela izay manana fampiasa tahaka ny Mono antsoina hoe Vala.
Nofafako fotsiny i Mono ary niaraka tamin'izay ny sasany tamin'ireo seho tiako indrindra dia voafafa ... inona ireo fampisehoana hafa hisolo azy ireo:
Muine, Banshee >> misy safidy maro hafa: Amarok, Rhythmbox, Songbird, Audacious, QuodLibet, Exaile, BMP, Sonata, XMMS, Etc.
Gnome-do >> varahina
Docky >> Avant Window Manager (AWN), Dock Kairo
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny tetikasa Mono dia tsidiho ny tranokala ofisialy ao amin'ny anglisy, Ankoatr'izay monologue izay mpanangona ny bilaogin'ny mpamorona Mono; na amin'ny teny Espaniôla amin'ny tranokala Mono Hispano, ho fanampin'ny bilaogy an'ireo olona mitazona ity tranonkala ity.
Aza adino ny mamela ny hevitrao momba ny Mono… =)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Inona ny Mono ary maninona no mety hampidi-doza?
Heveriko fa tsy hampiasa ny patantony hiadiana amin'i Mono, Monodevelop, Xamarine i Microsoft amin'ny ho avy. Ankoatr'izay, heveriko fa ireo fitaovana ireo dia mety hanamora ny fanitarana anao amin'ireo sehatra hafa izay mitaky ny toerana misy azy ireo eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana lozisialy amin'ny ankapobeny isan'andro. Heveriko fa Mono dia miasa be amin'ny fitaterana ny teknolojia C # sy .NET amin'ny sehatra hafa, izay mampanan-karena azy ireo amin'ny fotoana ara-teknolojia vaovao raha ny malefaka no resahina. Fantatr'i mono ny dikan'ny patanty ary azo antoka fa mitandrina izy mba tsy hianjera amin'ny fandikan-dalàna. Etsy ankilany, JAVA dia mandray ny toeran'ny mpitarika miaraka amin'ny sehatra JAVA EE6, izay ho an'ny tsiriko dia mihoatra ny fahaiza-manaon'ny Visual Studio. Noho io antony io indrindra no heveriko fa ho hitan'i Microsoft fa mety ny mitondra ny C # amin'ny Linux, MacOSX, BSD, Solaris, Android, sns ... Etsy ankilany, tsy ekeko ny mandray ireo somary manaitaitra ireo toerana misy ny hoe TSIA amin'i Microsoft amin'ny Linux na ny hoe Tsia ny Linux ao amin'ny Microsoft, mino aho fa ny tena fivoarana dia isan-karazany ary ny fandavana ny marina dia famerenana.
Hatramin'izao dia tsy nisy niova. Raha liana amin'ny fahaizanao mihazakazaka ny programa ataonao amin'ny rafitra samihafa ianao dia manoro hevitra an'i Java na python aho. Raha mahazo aina amin'ny syntax c # ianao, dia azo atao tsara koa ny vala.
Vao tsy ela akory izay dia nanapa-kevitra ny hifindra monina amin'ilay fiteny aho ary nifidy C #, hahafahako mampiasa ilay kaody ary manangona azy io hampiasaina amin'ireo sehatra Linux sy Windows.
Ankehitriny, mahita ity lahatsoratra ity aho dia manontany tena raha toa ka nahavita tsara (avy amin'ny soratr'i Richard Stallman no nilazako azy).
Azonao atao ve ny milaza amiko raha nanova zavatra iray ity daty ity?
(Fantatro fa 2 taona farafahakeliny ity lahatsoratra ity)
Araka ny nanamarihan'ilay namesake dia heveriko fa tsy tokony hametra ny fahafaha-mivelatra i Microsoft, raha ny marina, tsy mahazo fivelomana amin'izany izy. Mahita azy ireo afaka manafaka ny fiteny aza aho, satria mahazo vola amin'ny fampiharana, rafitra ary IDE.
Manomboka mieritreritra aho fa efa antitra kely amin'ireo zavatra ireo Andriamatoa Stallman androany. Nahafinaritra ahy ny namaky ny teny nataonao sy ny fieritreretanao fa na dia nifantoka tamin'ny C # aza ny fiarahamonina dia nametraka ny fitoriana voalohany nataony tamin'ny Android i Oracle, na dia ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy aza dia tsy tokony hadinoina fa Linux io, noho ny fanitsakitsahana ny patanty ho an'ny fampiasana… JAVA!
Ny hevitro dia ny fiarahamonina Linux tsy azo avela, noho ny avonavona fotsiny, hanakimpy ny masony amin'ireo safidy hafa sy ny varavarany ho an'ny mpamorona kalitao marobe, izay mampiasa ny teny filamatra hoe "mampifanaraka na mihodina." Mitoka-monina ny fahafatesana, na dia miadana aza.
Aza adino fa ny fiteny fandaharana dia foto-kevitra tsy mitovy amin'ny rindranasa iray, izy io dia vokatra manerantany. Iza no ho afaka hanivana ny anglisy miteny fa fitenin'ny kapitalisma izy io?
Javier L dia hoy izy:
Miresaka momba ny MS izy ireo toy ny hoe tsy fantany ny fivezivezeny eo amin'ny sehatry ny marketing, na efa hadinon'izy ireo ny tranga 99 rehefa nanova ny ampahany amin'ny sehatra JAVA i MS mba tsy hiasa amin'ny rindrambaiko hafa ilay rindrambaiko voasoratra ao amin'ny suite misy azy tsy IE6, raha tsikaritr'izao tontolo izao, nirotsaka ny fitoriana na aiza na aiza, fa ny tena zava-dehibe, ny ankamaroan'ny rindrambaiko an-tsoratra dia tsy maintsy namboarina. MS dia orinasa te-hahazo tombony amin'ny fomba rehetra. Ho an'ireo izay manana rindrambaiko maimaimpoana, tsy mora ny mampiasa fitaovana arahin'antoka raha misy fitaovana maimaimpoana be dia be.
Valiny tamin'i Javier L
jlboch dia hoy izy:
Sergio, tsotra fotsiny ianao manadino fa ny gringos dia tsy manao na inona na inona, na inona na inona mihitsy, ary tsy manao asa soa izy ireo raha tsy mahazo antoka fa hamokatra dolara an-tapitrisany na dia aorian'ny hetsika ataony
Ny tena tian'ny gringos eto amin'ity tontolo ity dia ny rongony sy ny dolara (ao anatin'io lamina io)
Izany no antony nanjakan'izy ireo an'izao tontolo izao sy ny tsena tamin'ny kapitalisma nataony: ny fampiasana ny lalàn'ny tsorakazo sy ny lalàna dolara, ny tena ANDRIAMANITRA an'ny gringos dia dolara, na dia mamaky tratra any amin'ny tempolin'ny Protestanta na any am-piangonana aza ireo mpihatsaravelatsihy fiangonana katolika
Mamaly an'i jlboch
Max AC. dia hoy izy:
Ny Anti-Microsoft dia hitoby foana amin'ireo fomba fanao ampihimamba, ary na dia marina aza fa nandritra ny taona maro dia naneho fihetsika tsy dia mahafinaritra loatra ho an'ny mpampiasa farany i Microsoft, dia aza hadinoina fa orinasa orinasa izy ireo ary izay foana no hataon'izy ireo atao amin'ny vokatr'izy ireo dia orinasa. Saingy niova izao tontolo izao, nanjary lasa manerantany, ary i Microsoft tamin'izany fotoana izany dia nandà ny hanaiky azy, saingy tsy nisy safidy hafa, ny fampidirana ny fenitra Open-XML amin'ny MSOffice dia manaporofo izany, noterena mihitsy aza izy "hizara" code of the platform noteren'ny fitsipiky ny antitrust ary tsy maintsy nanao izany, ny Framework Net sy ny fiteniny dia voasoratra ao amin'ny vatan'ny ECMA eropeana izay ny tanjony dia ny hampanara-penitra ny Information Technologies, satria ny C # dia mifanitsy amin'ny ECMA-334 , ho an'ny CLI (izay mampihatra ny Mono) ECMA-335 ary ny C ++ / CLI dia ECMA-372, izany dia manome antoka fa misy ireo fiteny sy sehatra ireo ho an'ny besinimaro, noho izany dia tsy hanery na inona na inona Microsoft amin'ny ho avy fanajana ireo fiteny ireo. Ny fikasana Anti-Microsoft hanakivy ny fampiasana ny fiteny C # dia tsy mitombina, lalao maloto tahaka ireo nomelohin'i Microsoft, misokatra ny famaritana ny fiteny, misy fiteny hafa ary eto amin'ity izao tontolo izao ny tsara indrindra dia ny fifaninanana izay miteraka fanatsarana amin'ny sehatra rehetra, ny programmer irery dia tsy maintsy mahita ireo fiteny sy teknolojia samihafa ary hahafantatra ny mampiavaka azy ary izy no hanapa-kevitra samirery amin'izay hiarahany hanatanteraka ny fivoarany.
Valiny amin'i Max AC.
Fandraisana anjara tsara. Misaotra anao!
Ity Stalmann !! Jereo ireo mpikomy Microsoft eo ambany fandrianao XD.
Raha heverintsika fa ny tanjon'ny Microsoft miaraka amin'ny .net dia ny hahazo tombony amin'ny Java, heveriko fa tsara loatra ny fisian'ny Linux fampiharana hanafoanana ny fahafaha-manao azy.
ny hevitro dia raha tsy liana tamin'io ny microsoft dia tsy nanampy tamin'ny famoronana ireo fenitra ireo ary hiaro ireo tranombokiny .net mba hisorohana (na farafaharatsiny manakana) ny famotehana azy ireo. Ary tsy hoe efa eo amin'ny kinova 4.0 isika raha tsy diso aho ary ny trano fitehirizam-bokiny rehetra dia voarindra tsy misy olana ary mbola tsy voafandrika, izay hanatsara ny zava-bita.
Marina ihany koa fa i Microsoft dia efa nampandoa vola foana na dia ho an'ny rindran-damina indrindra aza ary izao dia manana ny repertoire azy, ohatra, kinova maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny studio visual ho an'ny .net ary tsy misy fetran'ny fahazoan-dàlana ary tsy izany ihany no ohatra tonga tao amin'ny lafiny ny afaka).
Ady iray eo amin'i Java sy .Net ary, toy ny amin'ny ady rehetra, dia raisina an-tanan-droa ny mpiray dina.
Ary ny marina dia, na tiantsika na tsia, miaina ao anatin'ny tontolo feno fahazoan-dàlana ... raha ny tena izy, ny vavahady sasany dia manasongadina ireo patanty "voahitsakitsaka" amin'ny pejin-tranonkala tsotra ary mahazatra loatra izany ka tsy heverintsika akory fa mety misy patanty zavatra tena tsotra be. Eo ireo patanty ary, raha misy te-handrava tetikasa iray aminao dia azo inoana fa hahita patanty iray voahitsakitsaka izy ireo amin'ny farany.
Raha sanatria tsy mazava ny resaka dia tsy mikasa ny hanangana fifandirana eto izay mitady hahafantatra raha tsara kokoa ny Windows na Linux, samy hafa fotsiny izy ireo ary samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany, toa ny zavatra hafa rehetra. Fa tantara hafa indray izany.
e2fletcher dia hoy izy:
Miaraka amin'i Microsoft dia tsy fantatrao mihitsy.
Valio i e2fletcher
ken torrealba dia hoy izy:
Fotoana vitsy lasa izay, nanaraka fampianarana iray aho, toko 1, momba an'i Mono, ary toa mora sy voajanahary kokoa noho Java io, tiako ity farany. Mampalahelo fa tsy afaka nahazo ny nomerao amin'ny magazine manaraka aho.
Araka ny fahazoako azy dia ny C # no fivoaran'ny J ++
Izany fampiharana Java mampisy olana izany dia nenjehin'ny Microsoft azy noho ny Sun, izay nandresen'i Sun, satria i Microsoft dia manana tranomboky (fonosana) izay tsy azo atao afa-tsy amin'ny Windows, izay mifanohitra amin'ny teny filamatra Java «manoratra ianao hitanao, manatanteraka ianao na oviana na aiza na aiza ».
Microsoft scrap J ++ sy C # layout
Ireto misy ny zava-misy: I Microsoft dia "nanolotra" ampahany iray amin'ny C # mba hahatonga an'i Mono ho ara-dalàna, noho izany ireo fizarana ireo dia tsy hiharan'ny fitsaram-bahoaka amin'ny ho avy, fa ny zavatra tsy nomen'i Microsoft raha toa ka manana vintana lehibe mitaky an'izay mampiasa azy i Microsoft , ity Ity no tranga, satria efa nisy teo aloha, niaraka tamin'ny rindrambaiko hafa, saingy hitranga izany raha manomboka mangalatra mpanjifa i Mono, na raha misy orinasa manomboka mahazo vola (betsaka) miaraka amin'ny fanohananana sy fampiharana ny fiteny na te hanondro azy io ho azy ireo, na dia betsaka aza izany no ho hitany fa mivoatra.
Ary farany, marihina fa i Miguel de Izcasa, manana fahasosorana amin'ny tsy fahafahany miasa amin'i Microsoft, noho ny pasipaorony ..., nahatonga azy namorona rindrambaiko nifanaraka tamin'ny Windows avy amin'ny Linux, mba ho tsapan'izy ireo fa "ny zavatra tsy azony "
Mamaly an'i ken torrealba
Tsy tiako ity 🙁
Heveriko fa ny iray amin'ireo antony hampiasana ny GNU / Linux dia satria loharano misokatra ary raha manomboka mampiasa rindrambaiko noforonin'i Microsoft isika dia hiditra amin'ny fifanoherana, koa nahoana ianao no mila rindrambaiko Microsoft rehefa misy vondron'olona lehibe ao amin'ny tontolon'ny loharanom-baovao misokatra hanohanana (ny fiavian'ny loharano misokatra) ary hanatsarana izay fampiharana loharano tsy misokatra, sa tsy izany?
Aleo tadidintsika fa tany am-boalohany .NET dia tsy maimaim-poana ary raha namoaka azy (ny ampahany navoaka) dia satria ny mpampiasa dia tsy nampiasa azy io noho ny fampiharana voafetra ary miaraka amin'izany dia very ny Microsoft eo amin'ireo mpamorona rehetra.
Raha ny tadiavinay dia ny hiasan'ny rindranasanay amin'ny sehatra samihafa, maninona raha mampiasa Java na Python. Ireo rindranasa vaovao noforonin'i Xamarin hivoatra ho an'ny ios na android, dia fomba iray fotsiny hananganana # fampandrosoana amin'ny fiteny iray, satria araka ny fantatsika rehetra dia tsara kokoa hatrany ny mampiasa ny tenindrazana.
Mikasika an'i Richard Stallman, heveriko fa izy no olona manana traikefa be indrindra amin'ny loharano misokatra ary noho izany farafaharatsiny mba tsy maintsy hijanonantsika hamakafaka kely ireo olana natrehiny, satria ny fahafantarana ny tantara dia tsy tokony hanao fahadisoana mitovy.
Tahaka ny olon-drehetra, ny mpamorona dia tsy maintsy mandoa faktiora (sakafo, fahasalamana sns), ary noho izany mila mila tombony ara-toekarena amin'ny asantsika isika, saingy manana fomba samihafa ahazoana azy (soa ihany), toy ny fanomezana, consultancies, fampandrosoana miorina amin'ny loharano misokatra sns. Tokony hampiasa ny fahaizantsika sy ny fahaizantsika isika, satria ity tontolo vaovao ity dia "mivadika" amin'ny fomba fanaony noho ireo mpandraharaha tsirairay misy ary ataon'izy ireo miasa araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Raha ny fijeriko dia isika no fototry ny teknolojia vaovao sy ny fiarahamonina vaovao fa tsy ireo orinasa.
Aza mino izany ???
Valiny ho an'ny Developers
Adrian Fernandez dia hoy izy:
Heveriko fa tsy hanao na inona na inona i M $ amin'ny fisamborana ireo izay manitsakitsaka ny patanty C #. Tsy nanao izany izy taloha, tsy manao an'io anio, ka zara raha mahavita azy atsy ho atsy. Etsy ankilany, fantatry ny paranoia maharitra an'i Stallman manohitra ny rindrambaiko tsy maimaimpoana (tsy afa-po amin'ny kernel Linux aza izy), mieritreritra mandritra ny 20 taona, tontolon'ny mpandraharaha enjehina noho ny M $.
Na izany na tsy izany. Monodevelop dia fitaovana tsara hiaraha-miasa. Ary raha misy matahotra ny hampiasa C # amin'ny zavatra hitanao dia mbola misy ny Basic, izay mahavita ny C # amin'ny ankamaroan'ny fivoarana.
Valiny tamin'i Adrián Fernández
Daniel Noriega dia hoy izy:
Eny, ekeko ihany koa ny hevitra sasany, injeniera elektronika aho saingy miaraka amin'ny vaovao amin'ny programa foana aho ary miezaka mianatra fiteny iray manontolo. Ny tena nanahirana ahy dia ny manandrana misafidy izay fiteny hianarako, mampiasa c ++ aho fa tsy fantatro ireo API ka saika tsy misy dikany izany, izany no mahatonga ahy manandrana mijery izay API hifantohako. Fa ny tadiaviko dia ny fahafaha-mamorona kaody miampita sehatra, ary mazava ho azy fa ny zavatra voalohany miavaka dia ny JDK na .Net.
Avy eo hitako ity lahatsoratra ity ary hitako marina fa be loatra ny paranoia. Heveriko fa tsy hanenjika an'i mono i Microsoft, mieritreritra aho fa ny mifanohitra amin'izany dia mahazo tombony i Microsoft mba hahazoan'ny mpampiasa programa fiteny amin'ny alalàn'ny fiteny iray afaka hitarina amin'ireo sehatra hafa. Mpampiasa Linux aho fa mpampiasa Windows ihany koa ary tiako ny Linux, saingy raha misy zavatra tsy tohanako momba ny Linux dia ny ampahany lehibe amin'ny vondrom-piarahamonina no mirehareha sy mitady vola ary miaina isan'andro miady amin'ny hadalana , manompa sy manambany ireo izay tsy fantany firy.
Valiny tamin'i Daniel Noriega
Jose Manuel Alcaraz placeholder sary dia hoy izy:
Mazava ho azy, aza manolo-tena ho amin'ny sikidy ... efa nofantsihinao ... .net dia loharano misokatra izao ... xD
Valiny tamin'i Jose Manuel Alcaraz
ehhh araka ny efa nolazaiko imbetsaka ... manala baraka an'i Richard Stallman aho ... maneho ny heviny izy ary mitsambikimbikina toy ny hoe didy masina ny teniny ... na dia afaka mampiasa ny patanty aza i MS amin'ny ho avy dia dia tsy latsa-danja koa fa (ho an'ny toerana onenana farafaharatsiny) ireo sehatra lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny orinasa dia .NET sy Java… ka ny fianarana mitantana an'i Mono dia hiafara amin'ny fahazoana asa mety ho mpamorona; Tsy dia salama loatra ho an'ny tontolon'ny Linux ny manorotoro izay safidy hafa izay tsy mitovy amin'ny "idealy" Atoa Stallman, izaho manokana dia mampiasa ny Mono ho fanandramana sy hianarana (satria tsy mametraka windows amin'ny solosaiko akory aho, fa tsy afaka mametraka izany amin'ny asan'ny asako) ary tsy mahatsiaro tena ho mpanota aho hahahaha arahaba.
Tsy raharahako na mampidi-doza ny C # na raha misy fiteny hafa misokatra NA sns, raha toa ka mizatra amin'ny rafitra fiasa misy azy ary mahazo tombony ary mamokatra vola, dia tsara izany, programmer prawn Linux aho izao izay mampiasa ny fiteny Basic mitovy amin'ny Windows Visual Basic ary raha hitako fa manamora ny fandaharana mora sy matihanina ary mivelatra amin'ny sehatra maro izany dia horaisina an-tanan-droa.
mihorohoro dia hoy izy:
Tompokolahy, satria efa nividy Xamarin i Microsoft tamin'ny 2016, mbola lavitra ny lalan'i Mono. Atsaharo ny fanatisme mora vidy ary miasa amin'ny safidy fandaharana hafa. .NET dia azo entina amin'ny fomba ofisialy amin'ny sehatra tsy Windows hatramin'ny 2014 (miaraka amin'ny fananganana DotNet Foundation) ary ny fampiharana ny .NET amin'ny tontolo tsy Windows dia nitombo tsikelikely. Tsy mieritreritra fotsiny ireo momba ny serivisy fampahalalana amin'ny Internet na mpizara Windows ianao toy ny taloha, fa mila mieritreritra momba ny Apache Web Server / Nginx miaraka amin'i .NET. Raha ny amiko: namolavola ASP.NET MVC 4/5 rindrambaiko amin'ny IIS aho ary avy eo ao amin'ny Apache Web Server amin'ny Linux Ubuntu nandritra ny herintaona, ary hatreto dia tsy nanana olana aho tamin'ny fampiharana ASP.NET MVC fampiharana amin'ny roa samy hafa sehatra Internet.
Ity ny fandraisako anjara, raha toa ianao ka liana amin'ny fifindra-monina ASP.NET MVC fangatahana mankany Apache / Ubuntu:
Mamaly an'i Terrorín
Ity karazana ady hevitra ity dia misy karavasy politika mahery ... hahahaaaa XD
Alemanina A. COPERTINO dia hoy izy:
Miaraka amin'i Java dia toy izany ihany no hitranga, raha sitraky ny Oracle izany dia mahatonga ny Java ho PAYABLE sy ny fananany ary isika rehetra maneno. Dia tena subjectif. Ary tsy mino aho fa ny orinasa na ny Linux mihitsy no mandrisika an'ity karazana fampandrosoana ity raha toa ka ho olana ho an'ny mpampiasa izany amin'ny ho avy .-
Valiny amin'ny Alemanina A. COPERTINO
Tsy hita i Elvino dia hoy izy:
Amin'ny fotoanan'ny fanatontoloana sy ny fanatontoloana dia tsara ny mahatadidy fihetsika ampihimamba sasany an'ny sasany
na fitondran-tena hamitahana, tsy misy dikany i Novel mahazo an'i Ximian, fa vakio
inona no nitranga tamin'ny Mysql / Sun Microsystm ary avy eo Oracle minono masoandro ary miaraka aminy Mysql mba hanjavona
Nila an'i Monty (mpamorona an'i Mysql) kely vao nahatsapa izany saingy namerina ny tetik'asany izy ary niteraka an'i MariaDB ary niafara tamin'ny fanaintainana tao amin'ny boriky tao Oracle
fa miaraka amin'i Mono dia mety hitranga izany.
Izaho dia programmer Cobol, C, Java ary Harbor Multilanguage Networking, ary ao amin'io lamina Under Aix, Linux ary Windows io
Mampifangaro rindranasa amin'i Socket aho, mampifandray rindranasa eo amin'ny samy hafa fiteny sy sehatra samihafa ho an'ny Banky
Heveriko fa raha lehibe ny tetikasa, izany hoe, hanisy tsipika kaody an'arivony maro izy, tsy maintsy milalao azy io ianao mba hiantohana ny fitomboany / fanovana sy ny fahaizany mandanjalanja
Raha kely ny kaody dia tsy manana olana aho amin'ny fanaovana azy ambanin'ny C #, raha tsara, mahery ary mamaha ny olana amiko dia tsara izany.
Valiny tamin'i Elvino Tsy hita
mifoka dia hoy izy:
.Net Core + C # = Ho avy
Mamaly amin'ny smitty
Jesu Arce dia hoy izy:
Tsara ny naoty mandra-pahatongan'ny "raha programmer ianao dia aza mampiasa C #" ... tamin'izay fotoana izay dia very ny fahatokisany rehetra.
Valiny tamin'i Jesu Arce
Jafet Granados dia hoy izy:
Tamin'ny taona 2020 dia efa voaporofo fa tsy nisy na inona na inona voalaza tao amin'ity lahatsoratra ity. Microsoft dia namorona .NET Core ary nanafaka azy maimaim-poana. Ankehitriny dia misy sehatra 3 miaraka amina tranomboky tena mitovy aminy, saingy amin'ny farany tsy mitovy (satria izy ireo dia noforonina hatrany am-boalohany), ny dingana manaraka dia ny fampiraisana ireo telo ho iray, ary izany indrindra no atao .NET 5 (tsy misy ilay teny "Core" na "Framework") izay, araka ny voalaza, dia sehatra vaovao, saingy loharanom-baovao misokatra, multiplatform ankehitriny, ary azo ampiasaina hamolavolana rindranasa tranonkala, rindranasa birao, fampiharana finday, IoT, AI, Cloud, sns. ... Ity fivoarana ity dia vokatry ny fahamaroan'ny mpamorona nanome anjara biriky noho ny fisian'izany .NET dia loharano misokatra. Tokony hitranga izany satria satria maro ny orinasa sy mpamorona mampiasa .NET amin'ny fomba malalaka, nosokafan'i Microsoft ny fahafaha-mivarotra ny serivisy ao aminy (indrindra amin'ny Cloud), izay tsy ferana amin'ny fampiasana .NET na C # ihany koa. Tsy adala i Microsoft, ny fanakatonana ny rindrambaiko ary ny fanombohana ny fitoriana no zavatra nampidi-doza ho azy ireo. Fa hey, tsy manambady amin'ny .NET na amin'ny fiteny hafa aho. Fa hitako tena mahaliana ny zavatra atao ao amin'ilay vondrom-piarahamonina voalaza. Amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny orinasa lehibe iray dia afaka mitombo haingana kokoa ny vondron'olona malalaka, indrindra satria misy ny .NET Foundation izay miandraikitra ny famerenana ireo tetikasa misy loharano misokatra ao amin'ny .NET, izay manome antoka fa misy ny baiko, mandroso ny debugging avy amin'i Microsoft mihitsy raha hijery ny tetik'asa voalaza.
Valiny tamin'i Jafet Granados
Fahadisoana iraisan'ny vaoavao amin'ny Linux